Modely Xiaomi maromaro no mandray ny beta an'ny MIUI 11 ambanin'ny Android 10 | Androidsis
Xiaomi dia te-hanohy hanome ohatra amin'ny sehatry ny smartphone miaraka amin'ny fanavaozana haingana sy tsara fanahy, mamela tsy nahy an'i Huawei tsy nahy, noho ny faharetan'ny firoboroboan'ity orinasa ity tamin'ny fanomezana fanavaozana fanamiana sy fampanantenany ho an'ireo mpampiasa azy. Izany dia noho izany Modely marobe marobe izao no mandray ny kinova beta MIUI 11 mifototra amin'ny Android 10.
Ny orinasa sinoa dia nanolotra ny tenany MIUI 11 ho an'ny maro amin'ireo finday tato anatin'ny volana vitsivitsy, saingy miorina amin'ny Android Pie. Ankehitriny, amin'ny maha-zava-baovao mahafinaritra, fitaovana dimy no mandray ny sosona fanamboarana amin'ny Android 10, ary izy ireo no Xiaomi Mi 9 SE, Mi 8 SE, Redmi Note 7, Note 8 Pro ary Redmi K20 / Xiaomi Mi 9T.
Ny Redmi K20, izay natomboka tany ivelan'i Shina ho Mi 9T (ankoatran'i India), dia nahazo ny beta stable MIUI 11, ary ny ambiny fonosana, ankoatry ny Redmi Note 7, dia nahazo ny beta stable China. Ho an'ny ampahany, Ny Redmi Note 7 dia nahazo ny beta nakatona sinoaNoho izany dia tsy ny mpampiasa ny telefaona voalaza rehetra akory no ho afaka hametraka azy eto amin'ny firenena.
Ireo fanavaozana ireo dia famantarana ny famoahana tsy ho ela ny fanavaozana Android 10 marin-toerana ho an'ny ankamaroan'ny telefaona Xiaomi. Fa anio, Izy ireo dia kinova taloha, izay midika fa mety mbola misy bibikely ihany. Na izany aza, raha mbola liana amin'ny fanandramana MIUI 11 miorina amin'ny Android 10 amin'ireo fitaovana voatanisa ianao dia azonao atao ny misintona ny ROM amin'ny rohy etsy ambany ary apetaho amin'ny fitaovanao. Tsy mila mampiasa fanarenana manokana ianao hanavaozana ny telefaona sy hametrahana ireo ROM ireo.
MIUI 11 Global Stable Beta ho an'ny Redmi K20 / Mi 9T (Global, EEA, India)
MIUI 11 beta maharitra ho an'ny Mi 8 SE
MIUI 11 beta maharitra ho an'i Mi MIX 3
MIUI 11 beta maharitra ho an'ny Mi 9 SE
MIUI 11 beta maharitra ho an'i Redmi Note 8 Pro
MIUI 11 Sina nanidy ny beta ho an'ny Redmi Note 7
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny Xiaomi Mi 9 SE, Mi 8 SE, Redmi Note 7, Note 8 Pro, K20 / Mi 9T dia mandray ny MIUI 11 beta miorina amin'ny Android 10
Ny Xiaomi Mi Box S dia mandray ny fanavaozana andrasana indrindra